Midawga Yurub oo u Dabaal dagayo Howl galada Burcad Badeedda ay ka wadeen Xeebaha Soomaaliya – Goobjoog News
Bishii Diseembar ee la soo dhaafay ayaa loo dabaaldegay sannad-guuradii 12aad ee ka soo bixitaankii Midowga Yurub ee joojinta burcad-badeednimada Geeska Afrika iyada oo loo marayo Howlgalka Atalanta.
Howlgalkan oo ahaa mid la bilaabay sanadkii 2008, xilligaas oo ay taagneyd dhibaatadii burcad badeedda Soomaaliya .
Maraakiibta konteynarrada ee mara jidadka ganacsiga ee bariga-galbeed ee u dhexeeya qaaradaha Yurub iyo Aasiya waxay ku jireen halis aad u weyn, maaddaama kooxo burcad badeed ah ay ka geeysan jireen xeebaha Soomaaliya, ay qabsadeen maraakiib tiradoodu badnayd isla markaana ay qabteen shaqaalihii markabka si ay u madax furasho u helaan. Had iyo jeer, dhimasho ayaa dhacday; dhaawacyada badmaaxiinta waxay ahaayeen wax iska caadi ah, ”ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay EU NavFor.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri “Ganacsiga caalamiga ah waa la carqaladeeyay, qarashka maraakiibta ayaa kor u kacayay iyo daryeelka badaha oo noqday in diiradda ugu weyn ee ururada ganacsiga badaha ay saaraan xeebaha, Markii ay dhibaatadu sii xumaatay Janaayo 2011, in kabadan 730 badmaaxayaal ah ayaa halmar la afduubtay waxaana weli 32 markab laga hayaa xeebaha Soomaaliya”.
Iyadoo la cambaareynayo dhammaan burcad-badeednimada iyo dhaca hubeysan ee ka dhanka ah maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya, qaraarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSCR) 1816 ayaa si aqlabiyad leh lagu ansixiyay 2-dii Juunyo 2008, Waxaa lagu ansixiyay oggolaanshaha Soomaaliya waxaana la oggolaaday tallaabooyin taxane ah oo lagula dagaallamayo dambiyada ka dhaca badda.
Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinkan, isla markaana lagu taageerayo UNSCR 1816 Midowga Yurub waxay billaabeen ficilkoodii ugu horreeyay ee isku-dubaridka millatari bishii Sebtember 2008.
“Midowga Yurub wuu ku faani karaa guulaha uu ka gaaray arrintan waxayna u badan tahay inuu sii wadi doono maalgelinta labada tallaabo ee ka hortagga iyo ka hortagga ah si loo hubiyo in amniga badaha uu sii jiro meel ka bilaabata Suez ilaa Socotra ilaa Seychelles. EU NavFor waxay xaqiijineysaa in maraakiibta caalamiga ah ee ganacsiga iyo bina’aadanimada ay ka badbaadi doonaan aafada burcad badeeda Soomaalida, ayaa ku yiri qoraalka . ”
Markii ay soo ifbaxday Brexit iyo dib u dejinta xarunta hawlgalka ee Northwood loona wareejiyay Rota / Brest, amarka iyo xakamaynta EU NavFor waxay ka guureen Boqortooyada Midowday una gudbeen Spain, waxaana taageeray Faransiiska. Baddu waxay ahayd ganacsi sidii caadiga ahayd, maadaama ka hortagga milateri ay weli lama huraan tahay in halista burcad-badeednimada ee biyaha caalamiga ah la ilaaliyo, ”ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka iyadoo intaas lagu daray inaysan jirin wax weerarro burcad-badeed ah tan iyo Abriil 2019.
James Swan iyo Qoorqoor oo Muqdisho Ku Kulmay, Maxay Kawada Hadleen?